IZICELO-Square Technology Group Co., Ltd.
Ubuchwepheshe besikwele buhlinzeka ngefriji yokuvunguza, ifriji yomhubhe, ifriji yokufaka impingement, okokuqandisa kwamapuleti okudla kwasolwandle okuhlukahlukene, kufaka phakathi ifilishi yezinhlanzi, umucu wonke, izimfanzi ze-shell-on / shelled, i-Octopus, Crabs, Surimi, njll.
Ifriji lokuvunguza, ifriji yomhubhe kanye neziqandisi zokufaka impova zilungele ukuqandisa yonke inkukhu, izingxenye zezinkukhu, izingxenye zenyama yenkomo, ama-patties enyama, inyama enomunyu, inyama ethosiwe, njll. Uhlelo lokuhlanza i-CIP ukuhlanza kahle nangendlela efanele ifriji. Ukufeza isikhathi eside sokukhiqiza esine-contineous, i-ADF air defrosting system ingafakwa njengenketho yokushaya isithwathwa esakhiwe kwikhoyili ngokulawula. Amafriji ethu asetshenzisiwe futhi amukelwa kahle ngabaprosesa abakhulu benyama yamazwe omhlaba, kufaka phakathi ukudla kweTyson, i-CP Foods, iHormel, iCargill, iCOFCO, njll.
Isikwele Technology sinikezela ngefriji evunguza ukuze iqhwale inhlama efriziwe, i-croissant, ikhekhe le-puff, uqweqwe lwe-tart, ama-pie. Siphinde futhi sinikeze okufakazela ukuvunguza ngokushisa nokulawula umswakama
Imikhiqizo yokulungela ukudla ingaba yiphakethe lesidlo sasemini, ipasta ephekiwe, irayisi ethosiwe, ama-noodle, amabhola enyama, ama-sage, njll. Kuya ngohlobo lomkhiqizo namandla okuqandisa, ikhasimende lingakhetha ifriji lokuvunguza, ifriji yomhubhe, ifriji yokuxhumana okuncane.
Umbhede we-IQF ophuzisiwe ulungele ukuqandisa imifino, izithelo, uphizi, ubhontshisi, njll.
Amafriza okuvunguza, amafriza emhubhe alungele ukuqandisa imikhiqizo yama-khekhe aseChina, kufaka phakathi amadombolo, amabhanisi enyama, izinaliti, iZongzi, njll.
Ukuze kukhiqizwe u-ayisikhilimu, kungamiswa yiqhwa lokuvunguza, ifriji yomhubhe, amafriji wokuxhumana okuncane. Amanye ama-proceosor e-ayisikhilimu aziwayo afaka i-Unilever-Wall's, iWufeng, iXuehui, neHongbaolai.
Imininingwane © I-Square Technology Group Co, Ltd. ICP: 11073309 号 -1 Izaziso Zezomthetho Ingxenye #: ICP 备 11073309 号 -1